खानपानको यस्तो बानीले स्वास्थ्यमा भने हानि गर्छ है! - HarekKhabar.com
खानपानको यस्तो बानीले स्वास्थ्यमा भने हानि गर्छ है!
खाना जिवन हो, सौखिन ब्यक्ती र परिवारे खानपानमा सौखिन देखिन्छन् । हाम्रो समाजमा खाना खानु र खुवाउनु समृद्धीको प्रतिक समेत मानिन्छ ।
बसिरहँदा धेरैलाई खानेकुराको तलतल लाग्छ । खानाका सौखिनहरुले त थरीथरी परिकार बनाएर खाने पनि गर्छन् । अहिले सबैजसो होम क्वारेन्टाइनमा छन् । परिवारसँग घरभित्रै बसिरहँदा पनि मीठो मसिनो पकाउने, खाने प्रवृत्ति बढ्छ । संभवत अहिले धेरैजसोका भान्सामा मीठो मसिनो पाक्ने गरेको छ, त्यो पनि पटक–पटक ।
कोरोना संक्रमणबाट जोगिदै पुरानै लयमा फर्कदै
३९६ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास, हेटौंडा अस्पतालमा ७ शैयाको आईसियु र १० शैयाको एचडियु कक्षको उद्घाटन
एक हजार ३८० जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए!
बालबालिकाले खाए भिटामिन ‘ए’, कोरोनाको त्रास र प्रचारप्रसारमा कमी भएका कारण लाभान्वित बालबालिकाको संख्यामा कमी
हरिबोधिनी एकादशी यस वर्ष बुधबार र बिहीबार मनाईदै